परिवारको खुशी खोज्न परदेशीएका रोल्पाका युवा यसरी फर्किए रातो बाकसमा ! [भिडियो] – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/परिवारको खुशी खोज्न परदेशीएका रोल्पाका युवा यसरी फर्किए रातो बाकसमा ! [भिडियो]
रोल्पा । नियतिले भनौ वा भाग्यले भनौ नेपाली युवाहरुलाई परदेश पस्नै पर्ने छ । लाखौ युवाहरु यतिखेर सपनाको सहर खोज्दै काठमान्डौको अन्तरराष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा लाईन लागेका छन् । त्यहि एउटा बाटो भएर आउने जानेहरुको घुईचो छ । अलिकति आशा, अलिधेरै भावना बोकेर खाडी मुलुक उड्ने युवाहरुको ताँती छ ।
परिवार सम्हाल्दा सम्हाल्दै आफैलाई रोक्न सकिनन् ऋचाले, रसाए रेखाका आँखा